नेपालका मुख्य नदीका उद्गमस्थलहरु कहाँ पर्दछन् ? – Lokpati.com
सरकार पक्राउ नेकपा अपराध नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड मृत्यु राशिफल चितवन केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका प्रधानमन्त्री
नेपालका मुख्य नदीका उद्गमस्थलहरु कहाँ पर्दछन् ?
काठमाडौं । सेती गण्डकी नदी अन्नपूर्ण हिमालबाट उत्पति भएको हो । महाकाली नदी अपि हिमालबाट उत्पति भएको हो । ठूलो भेरी नदी मुकुट हिमालबाट उत्पति भएको हो । विष्णुमति नदी सपनतिर्थबाट उत्पति भएको हो । बुढीगण्डकी नदीको उद्गमस्थल गणेश हिमाल हो ।
तामाकोशी नदी, सुनकोशी नदी, अरुण नदी, कर्णाली नदी र त्रिशुली नदीको उद्गमस्थल तिब्बत हो । वाग्मती नदीको उद्गमस्थल वागद्वार हो । कालिगण्डकी नदी मुस्ताङगको लेकबाट उत्पति भएको हो । सेती नदी सैपाल हिमालबाट उत्पति भएको हो । मस्र्याङ्दी नदी दामोदर हिमालबाट उत्पति भएको हो । बाणगङ्गा नदी अर्घाखाँची जिल्लाको चुरेबाट उत्पत्ति भएको हो । कन्काई नदी महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएको हो ।
कमला नदीको सिन्धुलिगढीबाट भएको हो । मुगु कर्णाली लद्दाख हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो । सानो भेरी धौलागिरी हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो । दरौदींको उत्पति बुद्ध हिमालबाट भएको हो । मेची नदीको उद्गमस्थल लालिखर्क हो । इन्द्रावतीको उद्गमस्थल दुध्कुंड हो । लिखु नदीको उद्गमस्थल रोल्वालिंग हो ।
नेपालमा सानाठूला नदी गरी करिब ५ हजार नदीनाला छन् । नेपालमा विश्वको कुल जलस्रोतको २.२७ प्रतिशत भाग रहेको छ । उद्गमस्थलको आधारमा नेपालकाहरुलाई ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थलको नदी । पहिलो स्तरको नदी हिमालयबाट उत्पत्ति हुन्छन्। यस्ता खालका नदी ठूलो वहावका साथ निरन्तररुपमा प्रवाहित हुन्छन् । पहिलो स्तरको नदीलाई सदावाहर नदी भनिन्छ ।
दोस्रो स्तरका नदी भन्नाले महाभारतबाट उत्पत्ति हुने नदीलाईृ बुझिन्छ । जसलाई पर्वतीय अनुगामी नदी पनि भनिन्छ । चुरेबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई तेस्रो स्तरको नदी भनिन्छ । कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो । कोशीका सात सायक नदीहरु सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, तमोर, अरुण ठूलो सायक र लिखु सबैभन्दा सानो हुन् । कुशिक ऋषिको नामबाट कोशी नदीको नाम राखिएको मानिन्छ । सबैभन्दा बढी बग्ने स्थान परिवर्तन गर्ने नदी पनि कोशी नदी हो ।
सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा पूर्वमा तमोर नदी रहेको छ भने पश्चिममा इन्द्रावती रहेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलोनदी सबैभन्दा धेरै वालुवा बोक्ने विश्वको दोस्रो नदी हो । विकारको दुख उपनामले चिनिने लम्बाई करिव ७ सय २० किमी रहेको नदी सप्तकोशी नदी हो । सप्तगण्डकी नदीका सात सहायक नदीहरु कालिगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेतीगण्डकी, मादी, मस्र्याङ्दी, दरौदीं र त्रिशुली हुन् । सप्तगण्डकीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी कालिगण्ड नदी हो ।
सप्तगण्डकीको सबैभन्दा सानो नदी त्रिशुली हो ।रुरुक्षेत्रको किनारमा रहेको सालिग्राम पाइने एकमात्र नदी, चक्राकार नदीको उपनामले चिनिने नदी सप्तगण्डकी हो । चितवनमा नारायणी नदी भनेर सप्तगण्डकी नदीलाई चिनिन्छ । सप्तगण्डकीको सबैभन्दा लामो नदी मस्याङ्दी हो । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली हो । यसका सहायक नदीहरु हुम्ला, कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठूलो भेरी, तिला बुढीगङ्गा र सेती हुन् ।
नेपालको सबैभन्दा लामो पुलकर्णाली नदीको गेरुवा भंगालोमाथि बनाइएको पुल हो । नेपालको कर्णाली नदीलाई भारतमा घाघरा भनेर चिनिन्छ । दुर्लभ प्राणी डल्फिन भेटिएको नदी कर्णाली हो । एउटा पिलरमा अडिएर बनेको विश्वको दोस्रो नदी कर्णाली नदी हो । एशियाको पहिलो नमुना पुल भएको नदी कर्णाली हो । भोटमा मुल भएका छ नदीहरु अरुण, तमोर, सुनकोशी, कर्णाली र त्रिशुली हुन् ।
सानो भेरी नदीलाई नेपालको उत्तरगङ्गाा भनेर चिनिन्छ । ललितपुरमा रहेको कर्मनाशा नदी दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्दछ । जसलाई उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ । एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी राप्ति हो । विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पति भएको नदी अरुण नदी हो । अरुण नदीको अर्को नाम फंगचु हो । कालिगण्डकीलाई गङ्गास्वरुपाको नामले चिनिन्छ । मादीलाई कौमारीस्वरुपाको नामले र सेतीलाई वैष्णवीस्वरुपाको नामले पनि चिनिन्छ ।
कुवेतको हाउजिङ निर्माणस्थलमा चार नेपालीको ज्यान गयो!
कोरोना रोकथाम र जनतालाई आस्वस्त पार्न सरकार असफल भएको…
विकास निमार्णका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छः भौतिक…
अस्गर अलीको ह्याकपछि बैंकका सेवाग्राही चिन्तित
नेबिसंघ नेताको अगुवाइमा मलामीको नामको पास बनाई लकडाउनको…